Sawir qaade James Mollison ayaa buugiisa ku muujiyay meesha ay caruurtu ku seexdaan aduunka | Abuurista khadka tooska ah
Sawir qaade James Mollison ayaa buugiisa ku muujiyay meesha ay caruurtu ku seexdaan aduunka
Ciise Arjona Montalvo | | Sawir
Sawir Qaadaha Ingriiska James mollison Waxaan ku safraa adduunka oo dhan sawir qaadista carruurta iyo qolalka jiifka. Sawirada cajiibka ah waxaa lagu daabacay buugiisa oo cinwaankiisu yahay 'Meesha Carruurtu Seexdaan', 'Meesha Carruurtu Seexdaan', halkaas oo uu ku soo bandhigayo kala duwanaanshaha naxdinta leh ee ka jira dhammaan waddammada, laga soo bilaabo gabdhaha dharka ku fadhiya kumanaan doolar guryahooda gaarka ah, wiilasha la seexda ari. OGAYSIIS: Sawirada qaar waxay noqon karaan kuwo qallafsan.
Waxaan rajeynayaa in buugga jaleecista akhristayaasha, laga soo bilaabo nolosha carruurta qaarkood ay ku nool yihiin xaalado aad u kala duwan oo adduunka ah; waa fursad aan ku milicsano sinaan la'aanta jirta, iyo inaan ku baraarugno sida aayatiinkeena inteenna ugu badan dunida horumartay u nahay, ayuu yiri James.
James Mollison wuxuu ku dhashay Kenya 1973 y ku barbaaray ingiriiska. Kadib barashada Fanka iyo Naqshadeynta Jaamacadda Oxford, cine iyo sawir qaadida ka dib Newport ee Dugsiga Farshaxanka iyo Naqshadeynta, ka dib wuxuu u wareegay Talyaaniga si uu uga shaqeeyo sheybaarka hal-abuurka ah Benetton. Laga soo bilaabo Ogosto 2011 Mollison wuxuu u shaqeynayay sidii tifaftiraha majaladda. 'Midabbada' leh Patrick Waterhouse.
Sannadkii 2009 wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta 'Odden Vic' ee ay bixiso Royal Photographic Society, Guushu waa mid cajiib ah farshaxanka sawir qaadista adoo ah sawir qaade Ingiriis ah oo jira 35 ama kayar. Shaqadiisa si ballaaran ayaa loogu daabacay adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan 'The New York Times Magazine', Magazine 'Mas'uulka', 'Dib u eegista Paris', 'GQ', 'Joornaalka New York' y 'Le Monde'. Buuggiisii ​​ugu dambeeyay ee carruurta waxaa la daabacay Abriil 2015, oo ah qalab taxane ah oo ka kooban daqiiqado dhacay intii lagu jiray nasasho, nooc ka mid ah sawirrada kala-gooshka ah.
Qolkiisa 'Meesha Carruurtu Seexdaan' waxaa la daabacay Noofambar 2010, wuxuu sheegayaa sheekooyinka carruurta kala duwan ee adduunka, oo loo sheegay sawirro iyo sawirrada qolalka jiifka. Buuggiisa saddexaad, Xerta, waxaa la daabacay 2008.
2007 ayuu daabacay 'Xusuusta Pablo Escobar', sheekada aan caadiga ahayn ee narco-ka ugu taajirsan uguna rabshadaha badan taariikhda "Waxaa lagu tiriyay boqolaal sawir oo ay soo ururisay Mollison". Waxay ahayd dabagalka shaqadiisa dameerrada waawayn, oo si ballaadhan loogu daawaday sidii bandhig lagu soo daray Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ee London '. Halkan waxaan ku tusaynaa qayb ka mid ah wareysi Maxay ka qabteen buugga aan kor ku soo xusnay.
Sidee ku heshay carruurta sawirrada? Sidee kula soo xiriirtay iyaga?
Wuxuu lahaa siyaabo kala duwan oo uu u shaqeeyo. Meelo sida Nepal, Shiinaha iyo Daanta Galbeed, waxaan la shaqeeyay 'Badbaadinta Carruurta' oo iga caawiyay helitaanka marinka, laakiin sidoo kale waxaan dareemay inay muhiim tahay inaan sawiro carruurta ka baxsan adduunka, waxaanan la shaqeeyay soo saare maxalli ah. Sidoo kale waxaan ka soo shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin Brazil, Japan iyo America.
Tani miyay u muuqataa sidii dun oo kale ah oo soconaya intaad ku guda jirto shaqadaada sawir-qaade?
Haa, maxay qabataa. Mashaariicdaydu badanaa waxay ka bilaabmaan indha indheyn aan mar dambe isku dayo inaan ku soo qaato sawirrada. Ku dhowaad had iyo jeer hareeraha sawirro taxane ah; Sawirada shaqsiyeed, inkasta oo ay muhiim yihiin, hadana muhiimad badan ma lahan.
Ma nooga sheekeyn kartaa sheeko ku saabsan carruurta sida gaarka ah u liidata ee aad kala kulantay safarkaaga?
Marka laga hadlayo xagjirnimada udhaxeysa laba caruur ah, taas oo udhaxeysa Jaime, oo aan kasoo sawiray dabaqa kore ee Fifth Avenue ee magaalada New York, iyo Lehlohonolo oo kunoolaa Lesotho, South Africa. Jamie wuxuu aad ugu mashquulsanaa iskuulka, wuxuuna lahaa jadwal mashquul badan oo ah howlaha dugsiga kadib sida Judo, casharada dabaasha, kubada cagta, iwm. Wuxuu sidoo kale jeclaa inuu ku barto maaliyadiisa mareegaha Citibank.
Lehlohonolo wuxuu la noolaa saddex carruur ah oo ay walaalo yihiin, kuwaas oo ahaa agoomo qaba cudurka AIDS-ka. Carruurtu waxay ku noolaayeen aqal dhoobo ah oo ay ku wada seexdeen dhulka, iyaga oo midba midka kale isku duubay si uu isu kululeeyo xilliyada qabowga habeenkii. Laba ka mid ah walaalaha Lehlohonolo waxay u lugeeyaan iskuul shan mayl u jira, halkaas oo sidoo kale la siiyo raashin bille ah sida hadhuudh, digir iyo saliid. Ma ay xusuusan karin markii ugu dambeysay ee ay hilib cunaan. Nasiib darrose, waxay u badan tahay inay ku noolaan doonaan saboolnimo inta ka hadhay noloshooda maxaa yeelay dalagyadu way adag tahay in lagu beero dhulka ma-dhalayska ah, mana jiraan wax rajo shaqo ah.
Sidee dukumiintiyada sawiradu u saamaynayaan dammaanad qaadka iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha?
Waxaan u maleynayaa waxa hadda ka socda Suuriya inay yihiin tusaale xiiso leh. Dadku waxay adeegsanayaan taleefannada gacanta si ay u diiwaan geliyaan xasuuqyada dhacaya, tanina waxay gacan ka geysaneysaa in diirada la saaro maskaxda dadka isla markaana lagu hayo warbaahinta. Markii, 20 sano ka hor, Assad aabihiis uu cabudhiyay kacdoon lagu laayay kumanaan qof, ma jirin dukumiintiyo badan waana la ogolaaday.
Website: jamemmollison | Buug: 'Meesha Carruurtu Seexdaan'
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawir qaade James Mollison ayaa buugiisa ku muujiyay meesha ay caruurtu ku seexdaan aduunka
Dhaqdhaqaaqa qadiimiga ah ee taariikh hore ayaa lagu rinjiyeeyay khad u gaar ah oo lafa-gurasho ka badan 95 milyan oo sano jir ah
Noolaha midabada badan leh ee ku nool buugga xusuusta ee Anna Bucciarelli Studio